ARCORA Ime ụlọ ịsa ahụ Ihe efu Ihe nkwụcha pọpụ - arcorarobinet
Welcome / ngwa / Foset ngwa / ARCORA Ime ụlọ ịwụ ahụ Ihe efu Ihe nkwụcha pọpuị
ARCORA Ime ụlọ ịwụ ahụ Ihe efu Ihe nkwụnye mgbapụta
Nzukọ lavatory na-apụta mmapụta nwere ebe a na-agbada agbacha maka sinks nwere njupụta. Emechara ọla kọpa na ọdụ.
Gbanwe plọg na-agbapụta agbapụta X3002 gị gwụrụ agaghị eme ka mmiri gị dịghachi ndụ, kamakwa ọ nwere ike inye ike na ntachi obi. WAWAFAUCET abụghị naanị na-enye okpu agbamakwụkwọ a kapịrị ọnụ, kamakwa okpu zuru ụwa ọnụ nke ga-enye otu egwuregwu dabara etu ị dị ugbu a. mfe iji wụnye: ntinye dị mfe site na akwụkwọ ntuziaka, ọ dịghị ngwaọrụ achọrọ Ngwa ngwa: American plumbing size plumbing, na-ejupụta maka ime ụlọ ịwụ na oghere drain na 1-1 / 2 "ma ọ bụ 1-3 / 4 dayameta »Ihe Mgbakwunye: Emere nke ABS dị elu, nwere ike ijere gị ozi ogologo oge. ọrụ dị mfe: pịa mkpuchi iji kaa akara wee pịa ọzọ iji mepee.
esi wụnye pop-up drain na overflow
1. Wepụ ngwa ngwa drainer drain ahụ, wee dozie flange sink n'okpuru igwe mmiri, wee tinye nsị na tebụl. Oghere.
2. Kechie teepu duct gburugburu ebe a na-ekpochapu mmiri, wee kwụzie na nsọtụ ọzọ nke nsị mmiri ahụ na nsị ahụ, wepụ akwa akwa ma ọ bụ akụkụ nsị mmiri, ma mee ka o sie ike. Nkọwa n'etiti etiti drain na drain ahụ na spana Mgbe echichi mechara, lelee ma nsọtụ abụọ nke ọkpọ mmiri ahụ na-edozi ma sie ike.
3. Lelee ma akụkụ niile arụnyere. Ọ bụrụ na enweghị nsogbu, ị nwere ike ịmalite itinye mmiri na nsị iji nwalee n'akụkụ iji hụ ma mmiri ọ na-esi na nsị mmiri ahụ. Ọ bụrụ na enweghị ihi mmiri ma ọ bụ ntinye mmiri, ọ na-egosi na etinyere ebe a na-etinye efere.
Enweghị nyocha ọ bụla.
Nwekwara ike ịmasị
ARCORA Ejiri akwa nhicha na-acha akwụkwọ edo na akwụkwọ edo
ARCORA Wall-n'ịnyịnya akwụkwọ towel njide ...
ARCORA No Akwụkwọ Mgbaze Akwụkwọ Na-ejide Nickel
ARCORA mposi akwụkwọ ịgụ No malite ịgba Nickel ...
ARCORA towel na-etinye na ọla edo
ARCORA athlọ ịsa ahụ na-ekpuchi Nickel
ARCORA ụlọ ịwụ sink faucets Nick ...
Sọlọmọnakaụntụ m katalọgụ Panier Akụkọ nyocha记